ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်အလုပ်မဖြစ် | အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ
ပင်မစာမျက်နှာ ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်အလုပ်မဖြစ်
TRF RCGP အသိအမှတ်ပြုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတင်ဆက်
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့အမည်တူသွားပါ။ ၎င်းသည်တော် ၀ င်ယောဂီများ၏တော်ဝင်ကောလိပ်မှအသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသည်။ အဆိုပါအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်နေ့လုံးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများအတွက်7CPD ခရက်ဒစ်နှင့်တစ်ဝက်နေ့ version ကိုများအတွက်4ခရက်ဒစ်တန်ဖိုးရှိသည်။ ၎င်းသည်ယူကေနှင့်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင်ရှိသည်။ ကျေးဇူးပြု ထိတှေ့ သငျသညျအနာဂတ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲနှင့်ပတ်သက်။ ပိုမိုသိလိုသို့မဟုတ်သင်၏inရိယာ၌ဖြစ်ရပ်တစ်ခုစီစဉ်ရန်လိုလျှင်ကျွန်တော်တို့ကို။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သင်တန်းကိုအကြိမ် ၂၀ ကျော်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
ဤအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို Covid ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုရပ်ဆိုင်းထားသည်။
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသုံးရင်အစာရှောင်ခြင်းတစ်ဦး compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာသည်။ ဤသည်စမတ်ဖုန်းနှင့်အတိတ် 10 နှစ်ပေါင်းဗီဒီယို streaming ရန်လွယ်ကူလက်လှမ်း၏ သာ. အသုံးပြုမှုနဲ့ကိုက်ညီ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုတစ်ကျယ်ပြန့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်ပေါ်ရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်တစ်ဦးလူပျိုအတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်တုန်လှုပ်စေသောတိုး, ယောက်ျားမိန်းမတို့အတွက်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု၏ကျယ်ပြန့်သက်သေအထောက်အထားနှင့်မြီးကောင်ပေါက်မှာပိုလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ခန္ဓာကိုယ် dysmorphia ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ရပ်ဆန်းနှင့်ဆက်စပ်သောခံရဖို့ပေါ်လာပါသည်။
ဒါဟာအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲနောက်ဆုံးပေါ်သုတေသနအပေါ်အခြေခံ, အထူးသဖြင့်ယေဘုယျနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်စွဲမှ neuroscience တစ်ခုမိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာသုတေသနကနေပေါ်ထွက်လာ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေအမျိုးမျိုးကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ကအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်, ဖြစ်နိုင်သမျှတိုးတက်မှုများနှင့်အကူပြန်လည်နာလန်ထူ options များနှင့်ပတ်သက်ပြီးယောဂီအကြားရောင်ပြန်ဆွေးနွေးမှုအားပေးပါလိမ့်မယ်။
Coronavirus ကူးစက်ရောဂါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အချိန်ပြည့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများစီစဉ်ထားခြင်းမရှိသေးပါ။ သို့သော်မည်သည့်အချိန်နှင့်မည်သည့်နေရာတွင်သင်ကျင်းပလိုသည်ကိုအကြံပြုလိုပါသည်။
09.00 - အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံနှင့်မိတ်ဆက်ခြင်း၊ Great Porn စမ်းသပ်မှု၊ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏လိင်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေး၊ ICD-11 နှင့်အတင်းအဓမ္မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါ၊ စွဲလမ်းမှုပုံစံနှင့် ဦး နှောက်မော်ဒယ်များ၊ သုံးစွဲသူ၏အပြုအမူပုံစံများနှင့်ပိုမိုအားကောင်းသည့်ပစ္စည်းများသို့မြှင့်တင်ခြင်း
10.30 - ချိုး
၁၀.၄၅ - ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းနှင့်အန္တရာယ်များ - ဆယ်ကျော်သက်များ၊ အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအပါအ ၀ င်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများ။ အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများ၊ ဖောက်သည်များအားသူတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုအကြောင်း၊ အုပ်စုလိုက်ဆွေးနွေးခြင်း။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြissuesနာများ၊ ကလေးမှကလေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု၊ ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ၏အခန်းကဏ္။ ။ Q & A session တစ်ခု။
13.00 - နေ့လည်စာ
14.00 - ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ကွဲပြားမှုဆိုင်ရာပြissuesနာများ၊ အသုံးပြုသူပြproblemsနာများကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန်အရင်းအမြစ်များထောက်ပံ့ပေးခြင်း။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည် LGBTQI + နှင့် MSM လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများတွင်နေထိုင်မှုပုံစံ၊ ပြorbနာ၊ ဓာတုဆေးဝါး၊ ကုသမှုရွေးချယ်စရာများ၊ ပြProbleနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုစကေး၊ အုပ်စုလိုက်ဆွေးနွေးခြင်း။
15.15 - ချိုး
၁၅.၃၀ - ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်ကာကွယ်ခြင်း - ညစ်ညမ်းမှုဘယ်လောက်များများလဲ။ ကုသခြင်းနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာရွေးချယ်စရာများ၊ စွဲခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ သင်၏လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခန်းတွင်အင်တာနက်အပြာစာပေများကိုနားလည်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အဆုံးသတ်သည်။
16.20 - အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်အနီးကပ်။
မာရိကရှပ် ပညာရေးဆိုင်ရာပရဟိတလုပ်ငန်းကိုတည်ထောင်သူနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သည် Reward Foundation - ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ လိင်နှင့်အင်တာနက်။ သူမသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏သက်ရောက်မှုများကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ ရာဇ ၀ တ်မှုတရားမျှတမှုနှင့်ပညာရေးနှင့်ပညာရှင်များနှင့်လွန်ခဲ့သော5နှစ်များအတွင်းကျောင်းများသို့တင်ပြခဲ့သည်။ မေရီသည်ယူအက်စ်တွင်လိင်ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်စေရန်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် 2016 မှ 2019 အထိဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။
မာရိသည်ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်တွင်ဆယ်နှစ်အခြေစိုက်ခဲ့သည်။ ထိုတွင်နေတိုးငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်လုံခြုံရေးအတွက်သိပ္ပံပညာအတွက်သုတေသနပြုခဲ့သည်။ သူမသည်ကင်းဘရစ် - MIT အင်စတီကျု၏သိပ္ပံသတင်းထောက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သူမဘရပ်ဆဲလ်ရှိဥရောပကော်မရှင်တွင်ယခင်ကလုပ်ခဲ့သောအလုပ်ဖြစ်သည်။ သူမသည်ဘဝကျွမ်းကျင်မှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများမှတဆင့်ကျောင်းသားများနှင့် ၀ န်ထမ်းများအားအမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိန်းသိမ်းရန်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ တွင် Mary သည် Lucy Cavendish ကောလိပ်တွင်ပညာသင်ဆုအဖြစ်ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်သို့ပြန်လာသည်။ မာရိသည်ဥပဒေကိုရှေ့နေနှင့်ဥပဒေပညာရှင်အဖြစ် ၁၅ နှစ်ကျော်ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ သူမသည်ကျန်းမာရေး၊ လိင်၊ ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သောကဏ္manyများစွာကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိညီလာခံများ၌ပြောဆိုခဲ့သည်။ သူမသည်မျက်နှာချင်းဆိုင်သင်ကြားခြင်းနှင့်ဆွေးနွေးခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ မာရိအကြောင်းအသေးစိတ်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည် ဒီမှာ.
Darryl Mead PhD သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအင်တာနက်ကျွမ်းကျင်သူနှင့်သုတေသီဖြစ်သည်။ The Reward Foundation ၏ဥက္ကas္ဌအဖြစ်သူသည်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများအတွက်အပြုအမူအပေါ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအာရုံစိုက်သည်။ Darryl သည်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖျော်ဖြေမှု၏အစဉ်အလာတစ်ခုအနေဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်ဖန်တီးထားသောကျန်းမာရေးစိန်ခေါ်မှုများအတွက်ဆန်းသစ်သောမူဝါဒတုံ့ပြန်မှုများကိုဖော်ထုတ်နေသည်။ စကော့တလန်အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်မှအကြီးတန်းအမှုဆောင်တစ် ဦး အနေနှင့် Darryl သည်ဗြိတိန်သည်အင်တာနက်ကိုသိမ်းဆည်းရန်အသုံးပြုသည့်စနစ်ကိုတည်ထောင်ရန်ကူညီခဲ့သည်။ လေ့ကျင့်သင်ကြားထားသောဆရာတစ် ဦး သည်ယခင်ကသိပ္ပံနှင့်ဆက်သွယ်သူအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးသတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင် (FCLIP) ဖြစ်သည်။
မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များ? အခြားမေးခွန်းများ? အီးမေးလ်ဖြင့်အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်: info@rewardfoundation.org သို့မဟုတ်မိုဘိုင်း: 07506475204 ။